बाल्यकालमै बिवाह गर्दाको पीडा, मनमायाँ परिन बिचल्ली | Sindhu Jwala
बाल्यकालमै बिवाह गर्दाको पीडा, मनमायाँ परिन बिचल्ली
असोज १४, फुलपिङकट्टी (सिन्धुपाल्चोक) । भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्र्तगत सेमुङकी १९ वर्षीय मनमायाँ बिक अहिले घर न घाटको भएकी छिन् ।
उनका श्रीमानले शारिरिक याताना दिएर घरमा बस्न नदिएपछि न्याय माग्न मंगलबार मनमायाँ भोटेकोशी गाउँपालिका आईपुगिन । १५ वर्षमै स्थानीय २२ वर्षका जितबहादुर बिकसंग भागी बिवाह गरेकी मनमायाँको ३ वर्षको छोरो छ । दुधेबालक काखमा खेलाउन पर्ने बेलामा श्रीमानले घरमा बस्न नदिएपछि माईतीमा बस्न थालेकी छिन् उनी । अहिले उनी न्याए माग्न गाउँपालिका पुगेकी हुन् । सामन्य भनाभन हँुदा पनि श्रीमान जितबहादुरले शारिर यातना दिने गरको उनले दुःखेसो पोखिन । यातनाकै कारण राम्रोसंग हिँडडुल गर्न नसकेको उनले बताईन । आफुलाई बाल्यकालमै भगाएर बिवाह गरेपनि अहिले भने घरमा बस्न नदिएको उनले सुनाईन । ‘तँ अर्कै केटो खोजेर बिहे गर, म अर्को केटी ल्याउँछु भन्दै उसले मलाई घरबाट निकालिदियो’, मनमायाँले रुँदै भनिन् । श्रीमानको यातनाले हिड्नै नसकेपछि दुईदिन लगाएर आमा संगै गाउँपालिका आईपुगेको उनले बताईन । छोरीलाई सुत्केरी अवस्थामै जितबहादुरले यातना दिने गरेको मनमायाँकी आमा मेथु बिकले बताईन । बिहे गरेको ३ महिनामै झगडा हुने गरेको उनले सुनाईन । एकवर्ष अगाडि गाउँपालिकामा जितबहादुरलाई झिकाएर कागज गरेपनि पुनः पटक–पटक दोहोरिएकोले आफुले न्याए नपाएको मनमायाँको भनाई छ ।
उनी गाउँपालिकाले न्याए दिन नसके जिल्ला अदालत जाने बताउँछिन् । ‘अब त्योसंग बस्दिन, अदालत गएर क्षतिपूर्ति सहित छोडपत्र गर्छु’, मनमायाँले भनिन् । उनीसंग रहेको दुधेबालक ३ वर्षको छोरा जितबहादुरले खोसेर लगेपछि झनै मनमायाँ पीडामा छिन् । ‘छोरालाई पाँचवर्ष सम्म पाल्ने अधिकार मेरो छ, त्यसपछि उसैलाई फिर्ता गर्छु, छोरो दिलाईदिन प¥यो’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाबुटीसंग मनमायाँले आँखामा आँशु टिल्पिलाउँदै बिन्ति गरिन ।
एकवर्ष अगाडी आफुले मनमायाँको समस्या हल गरेपनि फेरी बल्झिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पाको भनाई छ । ‘एकवर्ष अघि केटाकेटी दुवैलाई न्यायिक समितिले सम्झाएर पठाएको हो, अब मिल्न नसके छोडपत्र गरिदिनपर्छ’, न्यायिक समितिकी संयोजक शेर्पाले भनिन् । मनमायाँले बालबिवाह गरेपनि गाउँपालिका न्यायिक समितिमा बालबिवाह मुद्दा नआएको उपाध्यक्ष शेर्पाको भनाई छ । २० वर्ष यतालाई नेपालको कानुनले बालबिवाह भन्दै गैरकानु ठहर्छ तर मनमायाँले १५ वर्षमै आफुभन्दा ७ वर्ष माथिको पूरुषसंग वाध्यतामा विवाह गरेकी छिन् । पालिकामा समेत बालविवाह कति छन् भन्ने कुरा कुनै तथ्याङ्क छैन् । अझै बालबिवाह गर्ने समस्या सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा हुन सक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद निरौलाको भनाई छ । गाउँपालिकाले सफ्टवेयर मार्फत अनलाईन डाटा सुरु गरिएकाले केही समयमै वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर ल्याईने उनले बताए । ‘अब १५ दिनमा अनलाईन तथ्याङ्क भर्ने काम सकिन्छ, त्यसपछि वास्तविक ठहर्ने छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने ।
जिल्लामा एकदर्जन भन्दा बढी बालबालिका र महिला अधिकारका बारेमा पैरवी गर्ने संघसंस्था छन् । तर बालविवाह गरेर लैङिगक हिंसाको चपेटा परेकी विकट सेमुङकी मनमायाँ भने न्याय नपाएर भौतारी रहेकी छिन् ।
तल भिडियो हेर्नुहोस
This entry was posted in फिचर न्युज, समाचार. Bookmark the permalink.
पत्रकार महासंघले ग¥यो यस्तो निर्णय, राहत कोषको ४० प्रतिशत संक्रमित जनताको उपचारमा
ओली पकड भनिएको जुगलमै प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर नेकपाको बाहुल्यता
अन्र्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण
टुकीसंघ सुनकोशीको २८ औं वार्षिक साधारणसभा तथा सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम
दूधको मूल्यमा दश रुपैयाँ बढाउन किसानहरुको माग
‘राजनीति’ पेशा की जनसेवा ?